Jabuuti oo xil sare u magacowday orod-yahanka Maxamed Faarax - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Jabuuti oo xil sare u magacowday orod-yahanka Maxamed Faarax
Orodyahanka u dhashay dalka Britain balse asal ahaan Soomaali ah Mo Farah ayaa loo magacaabay safiirka Waaxda Dekadaha iyo Aaagagga Xorta ah ee Jabuuti, kaddib markii ay Jabuuti dekadda dalkaasi u beddeshay degmo ganacsi.
“Waxaan ku faraxsannahay inuu Mo Farah nagala soo qeyb galo dib u habeynta Dekadda Jabuuti. DPFZA waxay ku faraxsan tahay in mudane Mo uu noqdo safiirkeenna waxayna rajeyneysaa inay mustaqbalka kala shaqeyso mashaariic.” Ayay waaxdu ku soo qortay barteeda Twitter-ka.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo daah furay munaasabadda dib u habeynta dekadda ayaa sheegay in dekaddaasi laga dhigi doono degmada ganacsiga Bariga Afrika.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha oo dhagax dhigay Xarunta Gurmadka degdegga
Next articleAt least 13 Somali soldiers killed after military, al Shabaab clash